Top toban shaqooyin loogu talogalay qaxootiga - Shaqooyinka daryeelka shakhsi ahaaneed, adeegga iyo dayactirka | USAHello | USAHello
Hel GED® a
adeegga cell Free la UltraMobile
Top toban shaqooyin loogu talogalay qaxootiga – Shaqooyinka daryeelka shakhsi ahaaneed, adeegga iyo dayactirka
U qaybi hawlaha daryeelka shakhsiga ah, nadiifinta iyo dayactirka in warshado badan oo kala duwan. Laakiin shaqooyinka oo dhan waxay bixiyaan adeegyo muhiim ah.
Shaqooyinka waxaa ka mid ah wax walba oo ka nadiifinta iyo dayactirka guriga qurxinta timaha iyo daryeelka. Qaar badan oo ka mid ah hawlaha adeegyada noocan ah uma baahna shahaado ama waxbarasho sare. laakiin bixinta( mushaaraadka) ma aha wax wanaagsan.
daryeelka shakhsiga ah, adeegyo toos ah, nadiifinta iyo dayactirka hawlaha dhan waa tirsan yihiin meelaha ay shaqo badan laga heli karaa sii kordhaya. Waxaa jira sababo dhowr for this:
tiro sii kordhaysa ee dadka Mareykanka iyo u baahan yihiin daryeel dheeraad ah.
Dadka waqti dheeraad ah iyo lacag ku jimicsiga iyo daryeelka shakhsiga ah ku qaataan.
Dadka dakhligoodu sare diyaar u yihiin in ay bixiyaan lacagta loogu talagalay dadka kale ee shaqo-maalmeedka inay sameeyaan, sida socda eeyaha, shopping.
Dad badan ma doonayaan in ay adeeg toos ah, sida nadiifinta iyo daryeelka dadka waayeelka ah ama naafada ah samayn.
Waxaad ma mishiinada iyo aalado si fudud u badali kartaa dadka in badan oo ka mid ah hawlahaas.
Daryeelka xoolaha – Butros Care waa meel sii kordhaya ee dadka ku raaxaystaan ​​xoolaha.
midiidinnadiisa– bixinta joogo adeegyada iyo hanuunin guud ee tiyaatarada, goobaha madadaalada, casinos iyo firdows madadaalada.
Is ogow of carruurta – Baahida loo qabo shaqaalaha duurka ku ah daryeelka ilmaha sii kordhaya ee xannaano maalmeedka, dugsiyada iyo xarumaha guryaha gaarka loo leeyahay.
la isku qurxiyo Specialist – dadka daryeelka maqaarka iyo siiyaan dhammaan noocyada daawaynta quruxuna warshadaha sii kordhaya.
Fitness iyo Madadaalada – tababarayaasha Fitness iyo madaxda goobaha madadaalada ee shaqada waxaa sii kordhaya.
stylist timaha – design timaha u baahan yahay tababar iyo shahaado ee gobol kastaa.
guryaha nadiifiya iyo gabdhaheediiba – Dadka qabtaan nadiifinta iyo hawlaha kale ee guriga ku jira guryaha gaarka loo leeyahay iyo hotels waxaa inta badan lagu qasbay inay shaqeeyaan saacado waa bulshada.
iridjoogayaasheedii – Dadka fuliyo waajibaadka nadiifinta culus iyo dayactirka dhismayaasha waaweyn. Kanu waa shuqulkii in tirada sii kordhaysa ee shaqooyinka ka jira.
beerta Green takhasus bannaan – Shaqaynta dibadda in ay is ogow of iyo in la abuuro god oo waaweyn iyo meelaha dhulka, sida meelaha ku xeeran dhismayaasha waaweyn, beeraha dadweynaha.
iyo lugaha / pedicurist – Waxay u baahan tahay shaqo ee tababarka xirfadeed iyo qaar ka mid ah shaqaalaha ciddiyaha shahaado.
kaalmada daryeelka shakhsi ahaaneed – Daryeel dadka u baahan gargaar jireed, sida dadka waayeelka ah. Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu dhaqsiyaha badan sii kordhaya.
Horjoogaha – Waxaa ay leeyihiin dad badan oo ka mid ah kooxaha landscaper kooxda fillaysii iyo kooxda dayactirka u istaaaga ama tababarayaasha ay xiriiriyo ama loola socdo shaqadooda.
Ma hawlaha adeegga gaarka ah iyo dayactirka ku haboon ii?
Tani waxay aad u kala duwan hawlaha, sidaas mid ka mid ah meelo badan oo laga yaabo in ay ku haboon kuu. Waxaad arki doontaa wax ka reading liiska kor ku xusan in aan waa hawlaha xafiiska. Waxaa haboon dadka intooda badan ma doonayaan in ay ku sugan xafiiska ama waqti badan ku qaataan on computer ah. Qaar ka mid ah iyaga ka mid ah waxay u baahan yihiin shaqo badan jirka, sida doorman, ninkii beerta ka shaqaynayay, iyo Tababaraha taam.
Shaqooyinka daryeelka shakhsi ahaaneed iyo daryeelka ilmaha aan la tixgeliyo shaqada aad jirka. Waxay ku haboon dadka jecel iyo daryeelka kuwa kale oo lagu yaqaan in ay dulqaad iyo wanaag. Shaqooyinka la xiriira qaar ka mid ah shaqo wanaagsan xafiisyada ee ardayda ama dadka kale nadiifinta u baahan in ay ka shaqeeyaan fiidkii. Timo iyo adeegyada quruxda iyo xayawaanka adeegga wanaagsan ee qof doonayo in uu leedahay ganacsi noqon doontaa.
Eeg milkiilaha dukaan is qurxin ah Buffalo, New York, iyo qaxootiga kale hore ka hadleynaa bilaabo ganacsi u gaar ah
Xaggee ayaan ka bilowdo?
caawimaad ka dib-u-dejinta degaanka ama urur urur bulshada degaanka raadso
Haddii aad tahay qaxooti, ​​waxaad bilaabi kartaa in aad sheegato hay'adda dib-u-deegaamaynta ah ee barnaamijka qorista u gaar ah. Ururo badan iyo dib u dejinta ee xiriirka muhaajiriin loo shaqeeyayaasha deegaanka, sida hotels. Qaar ka mid ah sidoo kale ka shaqeeyaan barnaamijyada tababarka dalabyo.
hotel Read kuwaas oo aaminsan in qorista ee qaxootiga waa u dhaqaaqo smart
Ma u baahan tahay ka shaqeynayaan adeegga shakhsi ahaaneed, nadiifinta iyo dayactirka wax tababar ah. Tusaale ahaan, nadiifiya uu noqon doono tababar masraxa cusub guriga ama horjoogaha cusub shaqada by kormeeraha ama saaxiibkaa uu shaqada ah.
Search for fasalada kuu dhow
hawlaha dayactirka iyo adeegyada kale ee u baahan tababar qaar ka mid ah. kulliyadaha beesha ayaa bixiya koorasyo ​​ah ee dhismaha iyo dayactirka nidaamka u faa'iido badan ee lagu nadiifiyo. Waxay sidoo kale bixiyaan koorsooyin in muuqaalka dhirta, timo qurxinta iyo daryeelka maqaarka.
Raadi kulliyadda beesha kuu dhow
Timaha iyo Beauty
Waxa kale oo jira dugsiyo gaar ah timaha iyo quruxda badan. Raadi hal aqoonsan by Association American ah ee qurxinta Dugsiyada. Waa Mr_khaso ciddiyaha, timaha iyo quruxda shati marka la eego ay.
Search for shuruudaha ruqsadaha ee gobolka
Is ogow of carruurta
Uma baahnid ruqsad si ay u daryeelaan carruurta guriga, laakiin tababar a online kaa caawin kara in aad hesho shaqo. Ururka Laanqayrta Cas ayaa sameeyay tababar ah daryeelka carruurta ee aad samayn karto online. Waxaad heli doontaa shahaado.
Ururka Laanqayrta Cas waxay bixisaa tababar ku saabsan daryeelka carruurta online
Maxaan u baahan tahay?
Ma u baahan tahay si ay u GED®؟
Ma jeclaan lahayd Learning English?
Maxaa ku xiga?
Bilow raadinaya shaqo
Haddii aanay jirin hay'ad si ay kuu caawiyaan, waxaad bilaabi kartaa dalban waa in shaqo la baahida sare. xarumaha shaqada Dawladda oo lacag la'aan ah. Bixiyaan talo iyo sii liiska shaqooyinka deegaanka. Waxay ka caawinaya in taariikh nololeedka iyo codsiyada ganacsi. Waxaad Aousolk karaa xarumaha shaqada iyo tababarka waxbarashada.
Raadi kuugu dhow kiraystaan ​​xarunta
Waddooyinkiisa Career in timaha iyo qurux